Izinhlelo zokusebenza zesimo sezulu eziyi-6 ukuze isimo sezulu singakutholi ungalindelanga 🥇 Emulator.online ▷ 🥇
Ngubani ongakaze abanjwe yisimo sezulu uma ephuma ekhaya engenasambulela? Noma uphume wacabanga ukuthi kuzobanda bese uthola ilanga elikhulu kunawo wonke? Ngalezi nezinye izizathu, ukuba nohlelo lokusebenza lwesimo sezulu esihle kubalulekile ukugwema eminye imicimbi engalindelekile. Ngemuva kwakho konke, isimo sezulu sikhona ukusisiza.
Namuhla kunezicelo eziningi zesimo sezulu sokugwema izikhathi ezihlazo, njengokumanzi emsebenzini noma ukungashisi ilanga ngosuku lwaleyo pikiniki epaki. Kungakho i-SeoGranada yenze lolu hlu ngokuhamba phambili kwanamuhla. Hlola:
I-AccuWeather ingenye yezinhlelo zokusebenza zesimo sezulu ezidume kakhulu. Futhi ingenye enembile kunazo zonke, inikezela ngemininingwane yesimo sezulu sangempela, enezici eziningi ezipholile.
Ubuchwepheshe obusetshenziswa yi-AccuWeather buqinisekisa esinye sezibikezelo zezulu ezinokwethenjelwa kakhulu ezitholakalayo namuhla. Iziphepho kanye / noma izinguquko zesimo sezulu zixwayiswa ngokusebenzisa izexwayiso ezinembile, ngakho-ke akekho noyedwa obanjwa engalindelekile umcimbi wezulu ongalindelekile.
Ngaphezu kokwenza kube lula ukubuka izibikezelo zanamuhla noma amasonto amabili kusukela manje, i-AccuWeather inikeza imininingwane ngumoya, umswakama nomoya obandayo.
Ukulanda i-AccuWeather, khetha uhlelo olusebenzayo: I-Android / i-iOS.
2. Isimo sezulu
Izicelo zezinkanyezi ukuhlola i-Universe ngesikhathi sangempela
Nge-Climatempo ungazi isimo sezulu noma kuphi. Ungahlola ngesikhathi sangempela, ngaphezu kokuba nedatha yehora, yansuku zonke noma yosuku olulandelayo.
Ukwenza yonke into ihehe ngokwengeziwe, kungenzeka ukuthi uthole izindaba ezihlobene nesimo sezulu futhi wazi okwenzekayo emhlabeni. ngiyayithanda Iwijethi wohlelo lokusebenza, mane ukhethe uhlobo lokuqukethwe nokufinyelela ngqo kusuka ekhaya noma ukukhiya isikrini.
Kuhlelo lokusebenza kunolwazi ngejubane lomoya, ukubonakala, ingcindezi yasemkhathini, izikhathi zokuphuma nokushona kwelanga, umswakama womoya, phakathi kwabanye. Uhlelo lokusebenza lusalandelela iziphepho.
Ukulanda i-Climatempo, khetha uhlelo olusebenzayo: I-Android / i-iOS.
3. I-Yahoo Tempo
Enye yezicelo ezisetshenziswa kakhulu uma kukhulunywa ngesimo sezulu, i-Yahoo Weather ine-design enembile futhi emnandi, eletha izithombe ezimbalwa ezijwayela indawo, isikhathi nezimo zezulu.
Imininingwane yethulwa ngemibiko ephelele futhi enemininingwane, ngokubuka konke kwesimo sezulu kuze kube yizinsuku eziyi-10 ezizayo. Ebalazweni elihlanganayo, ungathola amazinga okushisa ezindaweni ezihlukene nokuqondisa nokwejubane lomoya.
Izexwayiso zesimo sezulu esibi zikusiza ukuthi uhlele kangcono usuku lwakho, kanye nemifanekiso ehehayo enikezela ngemininingwane efana nokuphuma kwelanga nokushona kwelanga nengcindezi yasemkhathini. Ukutholakala kwemisebe ye-ultraviolet (UV) kuyatholakala, kanye nomswakamo womoya.
Ukulanda i-Yahoo Tempo, khetha uhlelo olusebenzayo: I-Android / iOS.
4. Isimo sezulu ne-radar
Ngokubikezela kwesimo sezulu okusheshayo, nge-Clima & Radar ungavimbela amazinga okushisa emahoreni angama-24 noma ezinsukwini eziyi-14 kusukela manje. Futhi-ke, miningi neminye imininingwane yokugcina konke kuhamba njengokuhleliwe, ngaphandle kokubeka engozini imvula eyonakalisa ngalolo suku epaki!
Kusengenzeka ukuqinisekisa isivinini somoya, ukubonakala, amathuba emvula, ukuphuma kwelanga nezikhathi zokushona kwelanga, ukuzwa okushisayo, phakathi kweminye imininingwane eminingi. Ukuze ube nedatha enembile, ungafaka indawo ngqo kuhlelo lokusebenza.
Ukulanda i-Weather & Radar, khetha uhlelo olusebenzayo: I-Android / iOS.
5. Isikhathi seBrazil
Elinye lamaphuzu athakazelisa kakhulu weTempo Brasil ukuthi kungenzeka kube nemidwebo ebonakalayo evumela ukubona ngeso lengqondo izinguquko zesimo sezulu ngokushesha. Ngokuvuselelwa njalo, lonke ulwazi lutholakala kalula kusixhumi esibonakalayo enembile.
Ungabuza ngesimo sezulu kuze kufike ezinsukwini eziyi-10 ngaphambi kwesikhathi. Konke kumbiko onemininingwane, ofaka imininingwane ngemvula, umoya, imisebe ye-ultraviolet, ingcindezi yasemkhathini, phakathi kweminye imininingwane eminingi.
Kwenzelwe omakhalekhukhwini namathebulethi, ngeTempo Brasil ufinyelela kumamephu asebenzisanayo, okwenza kube lula ukuthola indawo ngqo yendawo ekhethelwe umcimbi noma ukuvakasha. Ilungele noma ngubani ofuna uhlelo olulula kepha olusebenzayo.
Ukulanda iTempo Brasil, khetha uhlelo olusebenzayo: I-Android / iOS.
6. Isimo sezulu
Ngalolu hlelo lokusebenza, unolwazi ngesikhathi sangempela, ukwazi ukuxhumana nemeteorology cishe emhlabeni wonke. Ukusuka eRio de Janeiro kuya eLondon, ukusuka eNew York kuya eTokyo, uhambisana nezinguquko ezincane zesimo sezulu futhi uzilungiselela usuku ngaphandle kwemicimbi engalindelekile.
Ngaphezu kwedatha yokushisa, Isimo Sezulu sibonisa imininingwane embikweni ophelele, kokubili ngama-degree Celsius naseFahrenheit. Ungathola ingcindezi yasemkhathini, ukubonakala, umswakama womoya, imvula ezindaweni ezihlukene kumamephu asebenzisanayo, isivinini somoya nesiqondiso, nokunye okuningi.
Cha Iwijethi kunolwazi olusha ngaso sonke isikhathi, ukwazi ukuxhumana nesimo sezulu sezinsuku noma amasonto alandelayo.
Ukulanda isibikezelo sezulu, chofoza lapha.
Ngezinhlelo zokusebenza ezingenhla, kukhona uhla olugcwele lolwazi mayelana nesimo sezulu kanye nezinguquko ezingazelelwe ezingazonakalisa izinhlelo zosuku olumangalisayo. Bheka imvula ukuze ungazibambi!
Manje njengoba usunolwazi lokuthi ungagcini emsebenzini, ungazi kanjani ngezinhlelo zokusebenza ezi-10 zokubala phansi bese ugcina ithrekhi yesikhathi esisele ngaphambi komshado noma lolo hambo olumangazayo?
Ukunikeza umfutho ngokomzwelo, sikhombisa nezicelo zemishwana engu-8 ukukukhuthaza nsuku zonke. Kodwa-ke, uma selivele lina futhi usendleleni eya emsebenzini noma eyunivesithi, sinezicelo eziyi-10 zokufunda izincwadi kumakhalekhukhwini wakho futhi sijabulele izikhathi eziyisidina zokufunda noma ukuzijabulisa.